U sheegidda ama Muujinta ka-qaybgalka | Martech Zone
Waxaan ahay taageere weyn Tom Peters. Sida Seth Godin, Tom Peters wuxuu bartay farshaxanka si loola wadaago waxa muuqda si hufan. Anigu sinnaba iskama dayin inaan liido hibadahooda. Waxaan hibadaas ka helay hogaamiyeyaal badan oo aan lasoo shaqeeyay - waxay awoodaan inay qaadaan arin aad u adag oo qalafsan, oo ay fududeeyaan si dhibaatada iyo xalka ay ugu cadaadaan dhamaan dadka ku lugta leh.
Waa kan xigasho weyn oo laga soo xigtay filimka Tom Peters ee ku saabsan Youtube. Si la yaab leh, ereyadu ma ahan kuwa Tom, mana uusan dhejin clip-ka Tom, laakiin waa mid sahlan oo mudan in wax laga qoro:
Haddii aad qof u sheegto, wuu illoobi doonaa.
Haddii aad qof tusto, way xusuusan karaan.
Laakiin haddii aad iyaga ka qayb gasho, way fahmi doonaan.
Farriin weyn, iyo mid aan shaki kaaga jirin inaad maqashay noloshaada oo dhan. Su'aasha aan soo bandhigi lahaa waxay tahay sidee arintan ula xiriirtaa warbaahinta iyo suuqgeynta? Waxaan in muddo ah ka wacdinayay arrimaha ku saabsan baloog garaynta, laakiin si fudud ayaan u dhigay… waa mid dhexdhexaad ah ku lug leh dadka halkii aad si fudud u muujin lahayd ama u sheegi lahayd. 'Kacaanka' barta wax lagu qoro kuma jiro qoraalka shaashadda, wuxuu ku lug leeyahay ka qeyb qaadashada bulshada.
Ha u qaadan ereygeyga, halkan waxaa ku yaal maqaal weyn oo ka socda ClickZ oo uu Pat Coyle ii soo gudbiyey.
Tags: ku lug lehHoggaankaoo muujinaysasheegiddaqaaliyeyaasha